प्रयोगशाला – Himalaya Television
विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सरकारकै कारण दुई वर्षदेखि बन्द (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ पुस २०७८ पोखरा । पोखरा कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा स्थापना गरिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई (प्रयोगशाला)को कार्यालय २ वर्ष देखि खुलेको छैन । परीक्षण गर्ने मेसिन नै संघीय सरकारले उठाएर लगेपछि कार्यालय बन्द भएको हो ।...
५ असार २०७८ काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेश जाने व्यक्तिको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको पिसिआर परीक्षणका लागि थप प्रयोगशालालाई अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेश जानेको प्रयोजनका लागि सबै...
१२ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार लिन निर्देशन दिएको छ । तर आज निजी प्रयोगशालाले विज्ञप्ती नै निकालेर सरकारको निर्देशन नमान्ने बताएका छन् । निजी प्रयोगशालाको यो घोषणा पछि सरकारले अव के गर्छ ?...
अब कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट प्रयोगशालाले नै दिनुपर्ने, परीक्षामा सहभागी हुन पीसीआर टेष्ट नगराउन आग्रह
११ असोज, २०७७, काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आफैं दिन प्रयोगशालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसअघि नेगेटिभ आए ल्याबले जानकारी गराउने र पोजेटिभ आए इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले जानकारी दिने गरेको थियो । तर अब प्रयोगशालाबाटै...
देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा १३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२७ भदौ, २०७७ काठमाडौं । आज थप १ सय ३४ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । चितवनमा १ सय ११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा थप ८७ जना र चितवन मेडिकल कलेज कोभिड ल्याबको...